Tag: tsvaga vanokurudzira | Martech Zone
Tag: tsvaga vanokurudzira
Nhasi, ndakabatana pamusoro pevamwe 100 B2B vanokurudzira mukutanga kweInfluencer Active. Iyi ndiyo yekutanga B2B influencer yedhijitari pamusika weB2B kana B2C mabhigi ekutsvaga nekuhaya vanokurudzira zvakananga. Iyo yepasirese-inozvishandira inokanganisa misika yakasarudzika nekuti inobatanidza vatengesi vemakambani neakagundiswa vanokurudzira avo vakavaka yakakosha inotevera uye mukurumbira unovimbika pane dzakasiyana nzira. Iyo kambani yakavambwa naAnthony James ("AJ"), uyo ane angangoita makore makumi matatu ekushambadzira ruzivo uye
Anoshanda naye Chris Abraham akanyora nezve blogger yekuwana mhinduro inonzi GroupHigh. BokaHigh's online chikuva inopa zvese zvinhu zvaunoda kuita blogger kusvika. GroupHigh inoita kuti iwe ugone kuwana mabloggi nyore nyore kune ako ekushambadzira mishandirapamwe kuburikidza ne yavo chaiyo-nguva blog yekutsvaga uye kusefa interface. Dhata inosanganisira misoro, localization, blog ruzivo, magariro account, fan uye muteveri data, organic yekutsvaga chiremera (kubva kuMoz) uye traffic stats kubva kuCompete.com uye Alexa. Ipuratifomu inobvumira vashandisi kuwana, kuteedzera uye
Lefty ndeye Instagram inosimudzira yekushambadzira chikuva iyo inobatsira mabhenji kubatana nevanonyanya kukoshesa vanokurudzira. Yakatungamirwa neyaimbove injiniya wekutsvaga weGoogle, timu yekusimudzira yaLefty yakashanda kwemakore maviri kuti iuye neplatifomu yakazara pane vese vanokurudzira Instagram. Lefty akavhura software yavo kuruzhinji uye mabhureki akaita saShiseido kana Uber vari kutoishandisa. Heino vhidhiyo pfupi inoratidza yavo mhinduro. Lefty inovaka mapesheni anokurudzira anoenderana nenzvimbo, zvido,